I-10 I-Oracle Training Courses & Certification yokukhula kwakho komsebenzi | IYO
IWindows Window 2016
Isil Service Service (SS)
I-ITIL yeNkonzo yeeNkonzo (SD)
Usebenziso lweNkonzo ye-ITIL (SO)
ITIL phakathi kweCSI
I-ITIL phakathi kwePPO
I-ITIL ICandelo eliPhakathi
I-ITIL ephakathi kweRCV
I-ITIL ephakathi kwe-SOA
Ingcali ye-ITIL (iMALC)
I-Defected Network Defender (CND)
I-ECSA v10 (i-EC-iBhunga eliQinisekisiweyo loPhuculo loKhuseleko)
I-LPT (I-Testing Penetration Tester)
EC-IBhunga eliQinisekisiweyo eliQinisekisiweyo (ECSP.net)
I-Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI)
I-EC-iBhunga leNtlekele yeNgcaciso yeCandelo (EDRP)
IKomiti ye-EC-IBhunga leNgcaciso loKhuseleko (Certified)
I-EC-IBhunga leNkcazo yeCandelo eliQinisekisiweyo (ECIH)
IKomiti ye-EC-IBhunga eliQinisekisiweyo lokuBhala ngeeNkcazo (ECES)
I-EC-Ibhunga leCandelo loKhuseleko loLwazi oluPhezulu (C | CISO)
EC-IBhunga eliQinisekisiweyo iComputer Programmer (Java)
Umsebenzisi Okhuselekileyo wekhompyutha (CSCU)
I-612 I-Advanced Advanced Mobile Forensics kunye noKhuseleko
I-613 i-Hacking ne-Hard Web App App / Web Site
I-614 Advanced Network yoKhuseleko
I-616 YOKUPHILA Ukuqinisekisa i-Windows Infrastructure
BlueCat IPAM Eyona nto
Ukhuseleko lweBlueCat kunye nokuPhakanyiswa okuPhambili
I-ArcSight ESM 6.9 Advanced Analyst
Ulawulo lwe-ArcSight Logger kunye neMisebenzi
I-HP ArcSight ESM 6.9 Security Administrator
Khangela uMlawuli woKhuseleko oqinisekisiweyo we-R80
Hlola iComputer Certified Certified Expert (CCSE)
I-Cyberoam I-Network Certified Network & Ukhuseleko
I-Cyberoam I-Network Certified Certified & Security System (CCNSP)
I-Trend Micro Deep Discovery
I-Micro Micro Security Scan Scan
I-Micro Micro Scan Scan
I-TRITON I-AP-DATA I-Courts Administrator
I-TRITON AP-EMAIL Umlawuli wekhosi
UMqeqeshi oyiNtloko kunye noMququzeleli (MTF)
ISatifikethi seMigaqo yoPhuhliso oluPhambili (CATT)
I-Psychometric Test Professional (CPTP)
Ukusebenza okuqinisekisiweyo kunye noMqhubi wokuPhumelela (CPCD)
I-Professional Analytics kwi-HR Analytics (CHAMP)
I-Analyst Development Development Analyst (CODA)
Uhlalutyo lokuQaphela abaQinisekisi (CRA)
I-OD yokungenelela kweNgcaciso (Professional CODIP)
I-Balance Score Card Professional (CBSCP)
IGosa eliQinisekisiweyo kunye noMqeqeshi woBomi (CELC)
IQumrhu eliQinisekisiweyo loRhwebo lwe-HR (CHRBP)
IsiCwangcisi seCandelo eliQinisekisiweyo (CID)
Umphathi woPhuhliso noPhuhliso oluqinisekisiweyo (CLDM)
I-Angular JS 1.5
I-Angular JS 2.0
I-Angular JS 4.0
Uvavanyo lwe-HP Software Automation Testing
I-Ranorex v8.x (Isisiseko kwi-Advanced)
HP Data Protection
Ukuqulunqwa kwi-AWS Training
I-AWS yoBugcisa boBuchule boBuchule
Ukuqwalasela ii-Cisco Nexus 9000 Switch kwi Mode ACI v2.0
Ukuqwalasela i-Cisco Nexus 9000 kwindlela ye-NX-OS (C9KNX)
CCNA Ukuhamba & Ukutshintsha iV3.0
CCNP Ukuhamba nokutshintsha
Isingeniso kwi-R ye-Programmers
Selenium ne eziqaphelekayo ngaphambili
U qeqesho loLuntu
I-10 I-Oracle Training Courses & Certification ingakunika ukuKhula kwimisebenzi yakho
ithunyelwe nguIziCwangciso zeNkcazo zeNnovative
I-Oracle Database Architecture
Iikholeji zoQeqesho kunye neZatifikethi
1. I-Oracle Solaris 11 Ulawulo lwe-Ed Ed 5 ENTSHA
2. I-Oracle Solaris 11 Ulawulo loKhuseleko Ed 2
3. I-Oracle Solaris 11 Ulawulo lwe-Advanced System Ed 5
4. I-Oracle Database 11g: Ulawulo lwe-Data Guard Administration Release 2
5. I-Oracle Database 11g: I-Workshop yoLawulo I-Release 2
6. I-Oracle Database 12c: Ulawulo
7. I-Oracle 11g i-R2 Iimpawu ezintsha
8. I-Oracle Database 11g: I-PL / Advanced SQL
9. I-Oracle Database 12c: I-PL / Advanced SQL
10. I-MySQL i-5.6 Database Administrator
Idatha ye-Oracle kukuqokelelwa kolwazi olunjengeyunithi. Isizathu sendawo yolwazi kukugcina nokufumana idatha ehambelanayo. Umncedisi wesiseko yindlela yokunyamekela imicimbi yokulawula idatha. Kukho konke, umncedisi uxhatshaza ngolwazi oluninzi kwidibaniselwano yeqela leqela ukuze abaninzi abathengi banokufumana ulwazi olufanayo. Oku kulwazi ngenkqubela phambili. I-server yomgca wolwazi ukhangelele ukungavumelekanga ukufika kwaye unike iimpendulo ezifanelekileyo zokudumala ukudumazeka.
I-Database ye-Oracle yinqununu yesiseko ejoliswe kwi-lattice enkulu yezoshishino ekuqikelelweni, indlela echanekileyo kunye neyokwezimali ekujongeni idatha kunye nezicelo. Ukwenza usebenziso lweematriki kwenza amachibi amaninzi kumashishini-aqhelekileyo, amandla kunye kunye namaseva. Ngalo bunjineli, isakhelo ngasinye esitsha sinokubonelelwa ngokukhawuleza kwi-pool yeendawo. Akukho mfuneko yokwenza umthwalo wokusebenza, kuba umda ungabandakanywa ngokufanelekileyo okanye uhanjiswe kwiindawo zamanzi njengoko kufuneka.
Isiseko sinezakhiwo eziqhubekayo kunye nezakhiwo zomzimba. Ekubeni izakhiwo ezizimeleyo nezizimeleyo zizimeleyo, ukugcinwa kweenkcukacha zengcaciso kungabuka ngaphandle kokuchaphazela ukungena kwezakhiwo zokubambisana ezihambelanayo. Ezinye zeeKrogram zoQeqesho zoQeqesho kunye neZatifikethi zinikezelwa ngezantsi:
Uqeqesho lwe-Oracle Solaris 11 yoLawulo loLawulo lweeNkqubo luquka ulawulo olupheleleyo lwenkqubo yentsebenziswano yentlangano kwi-Oracle Solaris 11.3 OS. Amanqaku aqinisekisiwe aphuma ekuveliseni isakhelo sokusebenza kwisikhokelo sodwa, ukujonga kunye nokuphanda okubalulekileyo. Inkqubo ye-Oracle Solaris 11 yoLawulo lweNkqubo ijoliswe ekunikezeni abalawuli abazikhokelo, kwaye bazama abaphathi bekhompyutheni abatsha kwi-Oracle Solaris 11 System Operating System, kunye neendlela ezifanelekileyo zokudlala imisebenzi yabo ngokufanelekileyo nangempumelelo.
Ukwenza inkqubo yokusekwa kunye nokuphuculwa kwezixhobo.
Ukujongana nokulawula, iinkqubo kunye nokufumana ukulawula.
Lawula ulwazi lokugcinwa, indawo, inkqubo kunye nabaxhasi.
Le khosi inika izandla-ukuqonda ukulungiselela iinjongo eziphambili zentlangano yenjongo ngenjongo yokwenza isakhelo sokulawula umsebenzi esilungisiweyo.
Olu qeqesho lwe-Oracle Solaris 11 Ulawulo loKhuseleko lukunceda ukuba wakhe ukufunda nokukwazi ukuguqula ukhuseleko kwi-Oracle Solaris 11. Abafundisi beYunivesithi ye-Oracle baya kukunceda ukuba uphonononge iimpawu ezintsha zokhuseleko ezifakwe kwi-Oracle Solaris 11.1 kunye ne-Oracle Solaris 11.2; sibone indlela yokusebenzisa le mpawu ukunciphisa ingozi yokuphazanyiswa kwaye ikhusele zombini izicelo kunye nolwazi.
Ukubonisa imigangatho ekhuselekileyo yokukhusela kunye nentuthuko.
Amalungelo abaklayenti abakhuselekileyo, amalungelo okuphatha, amaxwebhu kunye nesiseko soxwebhu.
Phunyezwa ulawulo lwe-cryptographic, ulungiselele ukhuseleko, ukhuseleko lweendawo kunye nokukhuselwa okuphawulwe.
Ukulawula ukhuseleko kunye nolawulo.
Isikrini sokunqongophala kwesikrini kunye nezikhokelo zesikhokelo esinxulumene nesokhuseleko
Xa ushiya le khosi, uya kushiya ngengqiqo ephezulu ye-Oracle Solaris 11.2 nenhlangano yokukhuseleko kunye nokuphucula amatsha okwenziwa kwi-OS. Oku kukuvumela ukuba uqhube isicelo sakho sokucela isicelo ngasese, kwisiqingatha nangesiqingatha, okanye kwiimpazamo ezivulekileyo. Le khosi iya kukunceda ngokukhawuleza ukwenza ukhuseleko, ukucwangcisa nokujonga ukhuseleko kwisakhelo se-Solaris 11.
Ukuphuhlisa i-Oracle Solaris 11.2 OS Expertise
Le khosi iya kwandiswa kwiinkqubo zesicwangciso-siseko soqeqesho kwi-Oracle Solaris 11.2 System Administration courses. Uya kusebenza kunye nabafundisi beYunivesithi yase-Oracle ukwakha ukuqonda okucacileyo kweempawu zokhuseleko ze-Oracle Solaris 11.2 onokukuchaphazela kwimisebenzi yakho yemihla ngemihla.
Kwimeko apho ungenayo inhlangano yentlangano ye-Oracle Solaris 11, kufuneka uqale uthathe i-Oracle Solaris 11 System Administration kunye ne-Oracle Solaris 11 Inkqubo yokuPhathwa kweeNkqubo eziPhambili kuqala ukuqinisekisa ukuqhutyelwa kwe-Oracle Solaris 11 yentlangano ngaphambi kokuzama uthathe le khosi. Ababenamava e-Oracle Solaris 10 kufuneka bathathe i-Transition kwi-Oracle ye-Solaris 11, njengoko ikhula kwi-Oracle Solaris 10 yokufunda kwaye inikeza uqeqesho olongezelelweyo olufanelekileyo kumava akho.
Olu qeqesho oluphambili lwe-Oracle Solaris 11 Ulawulo loLawulo lweeNkqubo eziPhambili lunikeza ukubandakanyeka okukhulu kwi-Oracle Solaris 11.3. Uza kufunda ingqondo edibeneyo kunye neengcamango zombutho ngokulungelelaniswa nezifundo kunye nezandla ezenzelwe ukuqinisa ukufunda kwakho.
Ukujongana nokulawula kunye neepropati zokulawula esebenzisa i-SMF.
Ukujongana nemisebenzi yokusebenzisa i-IPS.
Yehla uze uphinde ubuyekeze ulwazi olusebenzisa iZFS.
Hlela inkqubo kunye nofikelelo oluphezulu lokufikelela.
Ukujongana nokuhlela ulawulo.
Ukukhusela i-Oracle Solaris 11 OS.
Qalisa i-Oracle Solaris 11 OS kwimikhosi eyahlukeneyo.
Ukuphunyezwa kwenkqubo yokwaziswa kunye neefom.
Yakha iikhono eziphambili, eziphuthumayo kunye nokuqonda okuphezulu kwe-Oracle Solaris 11.3 yentlangano yentlangano kunye nokuphucula amatsha okwenziwa kwi-OS, ekuvumela ukuba usebenze izicelo zakho ezizicelo ezizimeleyo ngasese, kwisiqingatha nangesiqingatha, okanye kwiindawo ezivulekileyo.
Ukuphuhlisa i-Oracle Solaris 11.3 OS Expertise
Le khosi iya kwandiswa kwiinkqubo zesicwangciso-nkqubo sokufundisa esifundweni se-Oracle Solaris 11.3 System Administration. Uya kusebenza kunye nabafundisi beYunivesithi yase-Oracle ukwakha ukuqonda okucacileyo kwe-Oracle Solaris 11.3 OS onokuba nefuthe kwimisebenzi yakho yemihla ngemihla.
Nceda uqaphele: Le Nkundla ePhambili
Le yikhosi ephakamileyo eqhubela kumanqaku anomdla wokulungiselela nokulawula isakhelo se-Oracle Solaris 11. Kwimeko apho ungenayo inhlangano yentlangano ye-Oracle Solaris 11, kufuneka uthathe inkqubo ye-Oracle Solaris 11 yoLawulo lweNkqubo kuqala ukuqinisekisa ulwazi oluphumeleleyo lwenkqubo ye-Oracle Solaris 11. Ababenamava e-Oracle Solaris 10 kufuneka bathathe iNguqulelo kwi-Oracle Solaris 11 ngenkambo, njengoko iya kwandisa ulwazi lwakho lwe-Oracle Solaris 10 kwaye inikeza uqeqesho olongezelelweyo olulungele amava akho.
4. I-Oracle Database 11g: Ulawulo loLwazi lweNgcaciso Ukukhululwa kwe2
I-Oracle Database 11g: Ulawulo lwe-Data Guard Ukhupha uqeqesho lwe-2 lunceda ukwakhiwa kwamakhono okusebenzisa i-Oracle Data Guard ukuqinisekisa i-Oracle database yakho malunga nokucwangciswa kunye nexesha elingaphantsi kwexesha. Phanda indlela i-Data Guard yokulondolozwa kweenkcukacha ezinokusetyenziswa ngayo ingasetyenziselwa ukuqiniswa kwamandla okudala, umzekelo, ukuvakalisa, ukubuza imibuzo nokuvavanya, ngelixa kwinqanaba lokulinda.
Ukukhupha iifayile zokusingatha iifom esinye kwesakhelo
Ukukhuphela ukufunwa kwesinye isikhokelo
Ukwakha izikhokelo ezifumanekayo
Isiqinisekiso ngokukhawuleza, esiqinileyo, esilondekileyo kwaye esilula ukujongana nokuqhutywa. Ukuphucula umthwalo wemisebenzi yolwazi, uhlawule iindleko ze-IT kwaye udlulise uhlobo oluphezulu lolawulo ngokunika amandla umanyano ocolileyo kunye ngokukhawuleza ngaphakathi kwi-Datacenter yakho.
I-Data Guard Architecture
Le khosi iphanda i-Data Guard ubunjineli, ukusekwa kwezinto eziphathekayo kunye neengqiqo ezilumkileyo kunye neengxenye ezihambayo. Utitshala ootitshala baya kukunceda ukuba uphando nge-Oracle Data Guard izixhobo ze-11g, eziquka i-Oracle Active Data Guard kunye neenkcukacha ze-standby database.
5. I-Oracle Database 11g: I-Workshop yoLawulo Ukukhululwa kwe2
I-Oracle Database 11g: I-Workshop yoLawulo I-Release I-2 iphanda uphando olubalulekileyo lwe-database yolungelelaniso. Ootitshala beeYunivesithi ze-Oracle baya kuqinisa imixholo ngeendlela ezizenzekelayo eziza kukumisela ukuthelekisa uvavanyo lwe-Oracle Certified Associate.
Ukwazisa i-Oracle Grid Infrastructure.
Yenza uphinde ubongamele abathengi.
Qalisa kwaye uyile i-Oracle Database.
Yenza uphinde uphathe iindawo zokugcina impahla.
Ukujongisisa i-Oracle Database.
Ukuqonda ubunjineli beenkcukacha ze-Oracle kunye nendlela amaqela ayo asebenze ngayo kwaye axubane nomnye.
Yenza ukuqiniswa nokuhlaziya.
Isiqinisekiso ngokukhawuleza, esiqinileyo, esilondekileyo kwaye esilula ukujongana nokuqhutywa. Ukuphucula imithwalo yemisebenzi yolwazi, uhlawule iindleko ze-IT kwaye udlulise uhlobo oluphezulu lolawulo ngokunika amandla ukuhlanganiswa okukhawulezayo kunye okukhawulezayo ngaphakathi kweDatacenter yakho.
Yakha iDatabase yoLwazi
Ngokufanayo uza kufumana indlela yokwenza i-database yolwazi kwaye uhambelane ngokufanelekileyo neendlela ezahlukeneyo ngendlela efanelekileyo kunye neyobuchule. Oku kubandakanya ukuhlolwa kokusebenza, ukhuseleko lweenkcukacha, ukulawulwa kwabaxhasi kunye neenkqubo zokuqinisa / ukuhlaziya.
I-Oracle Database 11g: I-Workshop yoLawulo I-Release 2 iyanelisa uqeqesho olufunekayo kwi-Oracle Certification Path. Uhlobo nje lootitshala oluqhubela kwiwebhu (i-LVC, i-LWC), kwi-class (ILT) okanye iikholeji ze-Training Demand ziyanelisa. Ukuba awunakucinga ukuba uqaphele ukuba izifundo zokuziHlola kunye neZiko loLwazi aziwanelisi imfuneko yoqeqesho.
I-Oracle Database 12c: I-Workshop yoLawulo iya kukubonisa malunga ne-Oracle Database yobunjineli. Uya kufumana indlela yokwenza ngokufanelekileyo umzekelo we-Oracle Database, uyilo lwe-Oracle Network Environment kwaye wenze inkxaso-nkcukacha yedatha. Kule khosi, uya kuqhelana ne-Oracle Database Cloud Service.
Yenza uphinde ubhekane ne-Oracle Database Instance.
Yenza uphinde uphathe i-Structures Storage.
Yila i-Oracle Network Environment.
Skrini kwiziko ledatha kwaye uhlolisise ukusebenza.
Funda iinkcukacha eziphambili kwiinkqubo zokuqinisa nokuvuselela.
Sebenzisa i-Oracle Support Workbench kunye ne-My Oracle Support ukuphucula i-Oracle Database program.
Thabatha ukuqonda kwe-Oracle Database Cloud Service.
Isiqinisekiso ngokukhawuleza, esinokuthenjwa, ukhuselekile kwaye silula ukujongana nokusetyenziswa. Ukulayishwa kwemithwalo yemisebenzi yedatha, ukuhlawula iindleko ze-IT kwaye udlulise uhlobo oluphezulu lolawulo ngokunika amandla umanyano kwizinto ezixhomekeke kuzo.
Ukuthatha inxaxheba kwiZenzo zoMsebenzi kunye neMiboniso
Isikhokelo esiyiNtloko kunye nemibukiso yezandla ziya kunika ngamava okwenene. Ngokuthatha inxaxheba kwimisebenzi yezandla ukuqinisa ukufunda kwakho, uya kudala ufune ukufumana iziphumo zokujongana ngokufanelekileyo neDatabase ye-Oracle.
I-Oracle Database 11g: Uqeqesho lwe-Workshop Release 2 luphanda uphando olubalulekileyo lwentlangano yolwazi olubalulekileyo, kuquka indlela yokuzisa nokugcina i-Oracle database. Fumana ngobunjineli kunye nendlela iindawo zeenkcukacha zisebenza ngayo kwaye zidibanisa. Yenza ukuqiniswa nokuhlaziya nokuhlaziya nokulungisa ulwazi. Ukujongana namacandelo egciniweyo egciniweyo njengememori, ukusetyenziswa kunye neefayili esebenzisa i-Oracle Database 11g.
8. I-Oracle Database 11g: Advanced PL / SQL
Kule nkcukacha ye-Oracle Database 11G Advanced PL / SQL uqeqesho, ootitshala beYunivesithi yase-Oracle baya kukunceda ukuba uphando iimpawu eziphambili ze-PL / SQL ukucwangcisa nokucwangcisa i-PL / SQL. Uya kuqonda ukuba idibanisa njani kunye nedatha kunye nezicelo ezahlukeneyo kwindlela efanelekileyo kakhulu.
PL / SQL ukuyila inkqubo ewamkelekileyo.
Yenza izicelo ze-PL / SQL zokusebenzisa ukuqokelela.
Ukuzalisekisa i-database yangasese kunye ne-grained grained to control.
Ikhowudi yokubhala ukusebenzisana kunye nezicelo zangaphandle ze-Java kunye ne-Java.
Ikhowudi yokubhala ngokubambisana kunye nemibhikisho eninzi kwaye isebenzise i-SECureFile LOBs.
Ukubhala kunye nokudibanisa i-PL / SQL ikhowudi ngempumelelo ukuphucula ukuphunyezwa.
Phinda usebenzise idilesi yeSQL ngolwimi lwe-PL / SQL ukubhala ikhowudi yesicelo. Oku kuya kunceda umbutho wakho uqonde ngokupheleleyo ukusetyenziswa kwemisebenzi engcono ye-Oracle.
KwiNgcaciso eSebenzi eyimfihlo
Ngokufanayo uya kujwayelana ne-Virtual Database (VPD) ukuphumeza iindlela zokukhusela. Funda amaqhinga kunye nezixhobo zokuqinisa izicelo zokulwa nokuhlaselwa kwe-SQL. Phanda uphumelelo lwenkqubo, ukusetyenziswa kweendlela zangaphandle ze-C kunye neJava, iifayile ze-PL / SQL kunye ne-grained grained.
I-Oracle Database 12c: Uqeqesho oluphambili lwe-PL / SQL lubonisa indlela yokusebenzisa iimpawu eziphambili ze-PL / SQL ukucacisa kunye nokudibanisa i-PL / SQL ukudibanisa kunye nesiseko sedatha kunye nezicelo ezahlukeneyo. Ootitshala beeYunivesithi ze-Oracle baya kukunceda ukuba uphonononge iimpawu eziphambili zoqwalaselo lweprogram, izibophelelo, izikratshi, izicwangciso ze-interface kunye nokuqokelela.
Ukubhala iinkqubo ezisebenzayo ze PL / SQL.
Phanda inkqubo yokusebenza.
Sebenzisa ngaphandle kweendlela zeC and Java.
Faka isicelo seP PL / SQL ukuyila inkqubo ewamkelekileyo.
Ikhowudi yokubhala ukudibanisa kunye nezicelo ezingaphandle kweC kunye neJava.
Ukubhala ikhowudi ekujongene nemibandela emininzi kwaye usebenzisa ii-LOBs ze-SecureFile.
Ukubhala kunye nokudibanisa i-PL / SQL ikhowudi ngokufanelekileyo ukwandisa ukusebenza.
Fumana indlela yokubhala iinkqubo ze-PL / SQL ezihlola izicelo ze-PL / SQL kunye nokugcina iindlela ezingakwandisa ukusebenza. Ngokubeka izixhobo kule khosi, uya kuqhelana ne-Virtual Database (VPD) ukuphumeza amalungiselelo okhuseleko kunye nokuphanda iinkqubo kunye nezixhobo zokuqinisa izicelo zakho malunga nokuhlaselwa kwe-SQL ukunyuswa kwamandla. Ukukhupha iprogram yeprogram ngokwenza iinkqubo ze PL / SQL ezijongene nekhowudi yeC kunye neJava.
Intshayelelo yosuku olulodwa kwikhosi ye-MySQL ye-5.6 ihlanganisa zonke iinkalo ezintsha kunye nezinye iziphuculo eziphambili kwi-MySQL 5.6 kunye ne-MySQL Enterprise Edition, kuquka ukusetyenziswa, ukulungelelaniswa, ukufikeleleka kunye nokuqiniswa. Ootitshala beeYunivesithi yase-Oracle baya kubakhokela iidoski eziphilayo.
Abafundi Abangenelwa Kule Nkambo:
Abathengi abatsha be-MySQL, abazange baphumelele ukubandakanyeka kwesikhokelo solawulo lweenkcukacha zoluntu.
Abaxhamli be-MySQL abanomdla ekufumaneni ngolu hlobo oluluncedo olubonakalayo nge-MySQL 5.5 Release
Yilungiselela ukusebenzisa kwakho i-mySQL ye-5.6 into yokukhutshwa kwento yonke ngokufanelekileyo.
Ezinye iiprogram ezihambelanayo:
Uqeqesho lweDatabase kwiGurgaon | I-Database Certification kwiGurgaon
Isikhokelo sabaQaleli kwi-Oracle Database Certification
Ixesha elizayo lwe-Oracle E-Business Suite kunye neNgcaciso emininzi kwiminyaka ezayo
Ukucacisa i-Oracle Dashibhodi
ezaposwa ngomhla12 Oct 2018
Innovative Technology Solutions yinkampani enika uqeqesho kumntu ngamnye, kwiinkampani kunye nakwiikholeji kwi-IT kunye nezakhono zobungcali. Ngaphandle koqeqesho i-ITS ineendawo zokuqeqesha ezifumanekayo kuzo zonke iindibano zenkampani zaseIndiya ngokufuna iimfuno zoqeqesho. Funda Okuninzi
IziCwangciso zeNkcazo zeNnovative
B 100 A, isixeko saseMzantsi 1, kufuphi neSignature Towers, Gurgaon, HR, Indiya - 122001
I-Copyright © 2017 - Zonke i-Right Reserved-Izixhobo ze-Technology Solutions umthetho wabucala.